न्यानो कपडा पाउँदा डोम समुदायमा खुशीयाली
सप्तरीको डुमबस्ती गुन्द्री ओढर रात विताउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका डोमसमुदायलाई कम्बल र खानेकुरा वितरण गरिएको छ । यसले डोम समुदायले जाडोमा कठ्यांग्रीएर रात विताउनु नपर्ने भएको छ ।
डोम समुदायको पीडा देखेपछि काठमाडौंको गोंगबुका एक परिवारले शनिबार कम्बल र केही खानेकुरा वितरण गरेका छन् । काठमाडौंका गोंगबुको टोखा नगरपालिका ११ निवासी दावा जिम्बाको परिवारले बोदेबर्साईन नगरपालिका वडा नं. २ नेगडाका ९ परिवार डोम बस्तीमा पुगेर एक÷एक थान कम्बल र केही खानेकुरा बाँडेका छन् ।
बोदेबर्साईन नगरपालिका वडा नं. २ नेगडाका डोमबस्तीमा चाडो सुरु भएदेखि उनीहरुमा रात कसरी विताउने चिन्ता बढेको थियो । चार वर्ष अघि चिसोले जवान छोरो धिरेन्द्र, त्यसको अर्को वर्ष पत्नी गोला र दुई वर्ष पहिले बुहारी मालती मरिक पनि ठण्डीकै कारणले गुमाउनु परेको थियो । यस्तो पिडादायक खबरले आफू भित्रको मानवीयताले यहाँ आउनबाट नरोकेको दावा जिम्बाले बताए ।
आफ्नो परिवारले कसरी त्यहाँका डोम समुदायलाई सहयोग गर्ने भनेर स्थानीय सञ्चारकर्मी माला कर्णलाई सम्पर्क गरी यहाँसम्म आएर केही सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको ७४ वर्षीय जिम्बाले बताए । कम्बल पाएपछि दंग देखिएका रतिलाल मरिकले यो कम्बलले सायद आफ्नो जिवन धान्ने बताउँदै खुशी व्यक्त गरे ।
अहिले पनि रतिलालको बाँसको टाँटी भएको घरमा चारैतिरबाट हावा छिर्ने भूइँमै पराल र गुन्द्र ओछाएर सुत्नु पर्ने बाध्यता छ । डुम समुदाय ऐलानीमा बस्नुपर्ने बाध्यताको साथै अहिले पनि छुवाछुतको भेदभाव रहेकोले रोगको साथै अपहेलनाको पनि शिकार बन्नु परेको छ । ती ९ बस्तीमा शौचालय र विजुलीको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
उनीहरु बसेको घर हेरेर जिम्बासँगै आएका साथी सुनिल प्रधानले सरकारको जनता आवासको घर र र्धुमुस सुन्तलीको एकीकृत बस्ती यहाँ पनि आवश्यक्ता रहेको बताए । सप्तरीको अति पिछिडीएका डोम बस्तीमा सरकारले जनता आवासको घर बनाई दिनुपर्ने उनले बताए । त्यहाँ उपस्थित स्थानीय समाजसेवी प्रमोद चालिसेले जनता आवासको घर जुन समुदायसम्म पुग्नुपर्ने त्यहाँसम्म नपुगेको गुनासो गरे ।